लर्निङ हाउसको प्रतिक्रिया, हाम्रो प्रमाणसहितको समाचार – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ पुष १८ गते शुक्रबार १३:२४ मा प्रकाशित
ताण्डव न्यूजमा प्रकाशित समाचारबारे लर्निङ हाउसले पत्रमार्फत दिएको प्रतिक्रिया यस प्रकार छ :
लर्निङ हाउस प्रालि विगत लामो समयदेखि व्यवस्थापन, करियर स्किल तथा विभिन्न भाषा कक्षा सञ्चालन गरी आएको कम्पनी हो । यस प्रालिका सञ्चालकको नाम जोडी संस्था र सञ्चालक समेतका सम्बन्धमा मिति २०७६ -९ – १४ र २०७६-९ -१६ मा प्रकाशित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
तहाँबाट प्रकाशित समाचारमा कम्पनीको सञ्चालक मिसेलले पैसा उठाएर विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम गरेको, टिकट मार्फत र अन्य कार्यक्रम गरेर करोडौँ रकम खाएको भन्ने लगायतको व्यहोरामा कुनै सत्यता छैन ।
लर्निङ हाउस प्रालि समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी नभएको व्यहोरा सामान्य जानकारीको विषय हुँदाहुँदै यस संस्था तथा सञ्चालकको इजजत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गरी समाचार प्रकाशन हुनु आफैँमा दुःखको कुरो हो । यस प्रालि र सञ्चालकलाई आरोप लगाइएको उक्त विषयमा सम्बन्धित निकाय, अधिकारीबाट जुनसुकै बखत अनुसन्धान, छानबिन भएमा सत्थ तथ्य उजागर हुने निश्चित छ ।
प्रमाणसहितको हाम्रो समाचार
लर्निङ हाउसको सञ्चालक मिसेलको विषयमा उजुरी परेपछि ताण्डव न्युजले समाचार प्रकाशन गर्यो । ताण्डवले समाचारमा आरोप भनेर उल्लेख गरेको छ । लर्निङ हाउसले समाचारको खण्डनमा आफ्नो संस्था समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी नरहेको उल्लेख छ ।
भनेपछि प्रालिले आफ्नो भवन बनाउन वा त्यसमा आवश्यक सामग्री किन्नका लागि रकम उठाउन मिल्छ ? बिजेनेस भिसामा आएको अमेरिकन नागरिक मिसेलले अमेरिकामै दर्ता भएको खाता लाइफमा पोखराको फोटो हालेर रकम उठाउन पाइन्छ ? उनले डोनेसन उठाउने वेबसाइटमै १४ हजार १ सय ७६ युएस डलर उठाएको मिसेलकै एकाउन्टमा उल्लेख छ ।
अर्को कुरा मिसेल विरुद्ध अध्यागमन पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रहरीकहाँ उजुरीसमेत परेको छ । हामीले त्यहाँबाट प्राप्त प्रमाणलाई मात्र आधार मानेनौ र आफैले पनि अनुसन्धान सुरु गर्यौँ। खोज्दै जाँदा मिसेल आफैले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट र ट्वीटरमा समेत प्रत्येक कार्यक्रममा उठेको रकमसहित पोस्ट गरेकी छिन् । जसको प्रमाण ताण्डव न्युजले सुरक्षित राखेको छ । केही प्रमाण यस प्रकार छन् ।
मिसेलबारे प्रकाशन गरिएका समाचारहरु
‘ज्याकराण्डा’ले सिँगारिएको गौरीघाट